Kutonhorera pasi naBen & Jerry's Horror Movie Ice Cream Flavour - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Kutonhorera pasi NaBen & Jerry's Horror Movie Ice Cream Flavour
Kutonhorera pasi NaBen & Jerry's Horror Movie Ice Cream Flavour
by John squires April 29, 2015 12,455 maonero
Kunyangwe tichiri nemwedzi yakati wandei kubva kutanga kwezhizha, mamiriro ekunze ari kutopisa munzvimbo zhinji dzenyika, zvinoreva kuti jingoni inozivikanwa yemurume ice cream ichakurumidza kunzwikwa. Muchokwadi, anga achityaira akatenderedza dhorobha rangu kwemavhiki akati wandei apfuura, uye zvirinani utende kuti ndakamurevera pazviitiko zvishoma.
Ehe, iri zvechokwadi ice cream mwaka zvekare, uye nhasi ndanga ndichida kugovana nemi imi varume chirongwa chidiki chinonakidza icho chine chokwadi chekuita chishuwo chenyu chekudya kunonaka kwedhiri.
Makore akati wandei kumashure, muimbi Frank Browning uye ndakabatana ndokugadzira akateedzana eanotyisa emamuvhi yaBen & Jerry ice cream zvinwiwa, izvo zvakatumirwa pane yangu blog Freddy Muchadenga. Isu takave nekunakidzwa kwakawanda kuuya nehungwaru hwakangwara pamwe nekugadzira maziso emakadhibhoni, uye ndinofunga inguva yekuti hunyanzvi hwapihwa hupenyu hwechipiri pano pawebhu.
Saka, zvaizotaridzika sei kana Ben & Jerry vakashandura mafirimu senge Kwomumwe Mwana Play, kupenya, Halloween uye Army Yerima mune zvinwiwa zve ice cream? Chera pasi apa kuti uwane!
Dzvanya papeji 2 ye "Iyo Human Centi Peach"!
Mapeji: 1 2 3 4